नेपाल एसबिआई बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ असार २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेपाल एसबिआई बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ असार २०७५)
on: २७ असार २०७५, बुधबार १३:३० लगानी
नेपाल एसबिआई बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ असार २०७५)
सन् १९९३ जुलाईमा स्थापना भएको नेपाल एसबिआई बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. १ अर्ब ३७ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब १० करोड नाफा कमाएको थियो । बैङ्कको सञ्चालन नाफा बढेकाले खुद नाफा बढेको हो । तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैङ्कको चुक्तापूँजी ६१ प्रतिशत बढेर रू. ८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । बैङ्कले १५ दशमलव ४२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेकाले पूँजी बढेको हो । रिजर्भ कोषमा रू. ४ अर्ब १५ करोड जम्मा भएको छ । सोही अवधिमा बैङ्कले वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. १८ करोड आम्दानी गरेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. १५ करोड १३ लाख व्यवस्था गरेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २२ दशमलव ८६ छ । यस बैङ्कका शाखा ७२ वटा, एटीएम १ सय दशओटा छन्, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालय र सातओटा एक्सटेन्शन काउण्टर छन् ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
चैत मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. ८३ अर्ब ८४ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेर रू. ७४ अर्ब ५ करोड खुद कर्जा प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा बैङ्कको लगानी रू. १८ अर्ब १० करोड छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. २ अर्ब ८९ करोड, कर्मचारी खर्च रू. ७९ करोड २९ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ६१ करोड ३८ लाख र सञ्चालन नाफा रू. २ अर्ब २० करोड छ । बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति २२ प्रतिशत बढेर रू. ८५ करोड ३९ लाख र अन्य सम्पत्ति २८ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।
बैङ्कले रू. ९८ लाख ३६ हजार निष्क्रिय कर्जाबाट व्यवस्था फिर्ता गर्न सफल भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव १३ प्रतिशत छ । बैङ्कको पूँजीकोष पर्याप्तता १४ दशमलव ५१ प्रतिशत र कोष लागत (वार्षिक) ५ दशमलव २४ प्रतिशत छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात २५ दशमलव ३० प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी रकम २२ रुपैयाँ ८६ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात २४ दशमलव ०६ टाइम्स, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १ हजार ३ सय १० रुपैया ७४ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा छ । सोमवारको अन्तिम शेयरमूल्य नेटवर्थको ३.३० गुणा बढी छ ।
खरीद चाप : बैङ्कको सोमवारको भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे १ गुणा बढी छ । सो समय अवधिमा २ हजार ७ सय ७९ कित्ता शेयर खरीद माग र १ हजार ७ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्ककोे ६७ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिन लङलेग्ड डोजी आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बैङ्कको शेयरमूल्य घट्ने बढ्ने कुनै पनि निश्चित सङ्केत देखाउँदैन । यस्तो अवस्थामा बैङ्कको आधारभूत पक्षलाई हेरेर लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
आरएसआई : बैङ्कको ६७ दिनको कारोबार अवधिमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४५ दशमलव ७७ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : बैङ्ककोे ६७ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ८ दशमलव ४९ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्था कम जोखीम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ६७ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजीकिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाको बीचमा छ । सोमवारको शेयरमूल्य रू. ५ सय १ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ५ सय १४ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. ४ सय ८७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।